घर मा पपकर्न पकाउने लागि उपकरण
आज पपकर्न - फिलिम शो को मात्र होइन एक अनिवार्य विशेषता, तर पनि एउटा अनुकूल च्याट लागि ठूलो कम्पनी को लागि एक महान व्यवहार छ। एक ठूलो मात्रा मा व्यवहार परंपरागत सार्वजनिक समारोहहरूमा बेचिएको छ (नियम, यो मेला थियो) र XIX सताब्दी को अन्त देखि संयुक्त राज्य अमेरिका मा थिएटर, र रूस मा, पपकर्न बनाउन को लागि पहिलो मिसिन को बीसौँ शताब्दीको 90 को दशक मा देखियो। निस्सन्देह, एक विशेष "exploding" मकै को, अन्न को आश्चर्यजनक स्वादिष्ट फट रही विभिन्न मा कराइ, र माथि यो बिन्दु गर्न सक्षम थिए, तर पपकर्न को उत्पादन मात्र विशेष मिसिन को पदोन्नति पछि सुरु यी औद्योगिक-मात्रा मा।
छैन यसलाई घर मा एक पैन मा पपकर्न पकाउन सजिलो छ?
अहिले स्वादिष्ट पपकर्न चलचित्र थिएटर वा सपिङ्ग मल मा जाने छैन। पपकर्न को प्रशंसक लामो prilovchilis को माइक्रोवेव वा एक पारंपरिक पैन मा विनम्रता पकाउन छ। पपकर्न, घर मा मिठाई को निर्माण को लागि तयार-को खान वा कच्चा माल धेरै सुपरमार्केट मा खरिद गर्न सकिन्छ।
तर यस्तो पपकर्न सामान्यतया पपकर्न ताजा, कर्मेल वा बाक्लो सिरप को एक "वास्तविक" स्वाद छैन धेरै सानो छ वा कुनै फट अनाज नरम र बस एक एक homogeneous mush मा मुखमा "शिकन", र पनि छैन को उपहार को सुखद गन्ध कुरा। एक माइक्रोवेव ओवन मा वा कराइ मा कुक पपकर्न धेरै troublesome छ, र स्वाद नै छैन।
मिठाई वा नूनिलो फट अनाज प्रेमीहरूलाई लागि एक उत्कृष्ट उत्पादन छ - बनाउन को लागि एकाइ खरिद घरमा पपकर्न।
पपकर्न पकाउने लागि उपकरण को सञ्चालन सिद्धान्त
कार्य को popkornitsy संयन्त्र यसको Ichkago को चार्ल्स Kretorom द्वारा 1885 मा फिर्ता आविष्कार देखि सानो परिवर्तन भएको छ। तर, पहिलो कार एक भाप र आज analogues बिजुली द्वारा काम थियो।
व्यवहार लागि पपकर्न खाना पकाउने लागि उपकरण तेल को एक सानो राशि खन्याउन र मकै को अनाज को आवश्यक नम्बर भर्न। पनि नुन वा चिनी, अरोमा additives, गैर-स्टिक एजेन्ट थपियो। पूर्व बयलर 200-400 डिग्री को एक तापमान गर्न गरम छ (तापमान मा मोडेल आधारमा एकदम भिन्न हुन सक्छन्)।
गर्मी को प्रभाव अन्तर्गत एक पैन वा रूपमा एक माइक्रोवेव ओवन मा, अनाज फुट्छ। केन्द्रक भित्र चिस्यान वाष्प मा खोल्दै र तीव्र गतिमा जम, को खोल खण्डन। समाप्त विनम्रता को बयलर आवरण उठ्छ र छुट्टै कन्टेनर मा हालिएको एउटा यस्तो तरिकामा सुसज्जित पपकर्न बनाउन लागि केही मिसिन, अरूलाई मा - पपकर्न मूल कच्चा माल भरिएको थियो जो कक्ष, रहिरहन्छ।
घर मा पपकर्न पकाउने लागि उपकरण फरक कन्फिगरेसन हुन सक्छ। सबै भन्दा संकुचित मिसिन मा जो सम्पूर्ण प्रक्रिया पालन गर्न अनुमति दिन्छ एक सुरक्षा कवर, कहिलेकाहीं पारदर्शी, एक घुमाउँदा मञ्च हो। यस्तो उपकरणहरू मा, समाप्त उत्पादन त्यसपछि अन्न ढाकिएको जो कचौरा, रहिरहन्छ। तपाईं विभिन्न मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ: पपकर्न पकाउने "बल", टाइपराइटर एक चिटिक्क र समकालीन डिजाइन वा उपकरण steamer वा नियमित पैन जस्तै देखिन्छ कि संग को लागि उपकरण।
Apparatuses को बयलर स्थापित छ जो भित्र थप एक-टुक्रा आवास छन्। जस्तै "थुक्नु", भनेर खाना प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ छुट्टै ट्यांक मा उपचार गर्न तयार छ सबै अनाज फुट्छ पर्खिरहेका बिना यस्तो मिसिन। तिनीहरूले सामान्यतया रेट्रो शैली मा बाहिर ठूलो घटनाहरूका समयमा घरेलू प्रयोग वा पपकर्न पकाउने लागि गरिन्छ। थप सजावट बिना ठोस भट्टामा - पनि डिजाइन छन्।
जहाँ पपकर्न पकाउने लागि मिसिन किन्न
पपकर्न बनाउन को लागि मिसिन घरेलू उपकरण को खुद्रा पसलहरुमा फेला पार्न कठिन सामान्यतया छ। यदि हामी साना सहर बारेमा कुरा गर्दै विशेष गरी यो सत्य हो। सल्लाह र व्यवस्थापन भुक्तानी प्राप्त गर्न इन्टरनेटमा मार्फत खरिद गर्न सक्छन्, मोडेल को एक किसिम ले पपकर्न पकाउने लागि उपयुक्त घर उपकरण चयन गर्नुहोस्। घरेलू र औद्योगिक प्रयोगको लागि मोडेल को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान अनलाइन पसलहरूमा जस्तै उपकरणहरू अनाज र flavorings को बिक्री मा विशेषज्ञता।
जब popkronitsu छनौट लागि के हेर्न
पपकर्न पकाउने, साथै अन्य कुनै पनि उपकरण लागि उपकरण, ध्यान दिएर चुनिएको हुनुपर्छ। यो उत्पादन धेरै तरिकामा आशा पूरा कि आकलन गर्न आवश्यक छ। पहिलो, हामी ध्यान गर्नुपर्छ:
आयाम र प्रदर्शन
यो पपकर्न मित्र को एक जोडी समूहका लागि कहिले काँही खाना पकाउन मानिन्छ छ भने एक ठूलो आउटडोर popkornitsu प्राप्त गर्न आवश्यक छैन: तपाईं को आवश्यकता तपाईंको आफ्नै आवश्यकता सुरु गर्न सबै को पहिलो। त्यसको विपरीत, जो अक्सर सँगै घर थिएटर मा अर्को नवीनता हेर्दै हुन्छ ठूलो कम्पनीहरु, लागि, एक कम्प्याक्ट उपकरण फिट गर्न असम्भाव्य छ।
मिसिन को आयाम यसका प्रदर्शन निर्भर गर्दछ। पपकर्न पकाउने लागि आयाम एकदम भिन्न हुन सक्छन्: अनलाइन स्टोर मा संकुचित उपकरणहरू र औद्योगिक उत्पादन को असली दिग्गज दुवै छन्। सानो मोडेल (20h20h20 सेमी) पपकर्न घण्टा तयार बारेमा 1 किलो को सक्षम, धेरै यन्त्रहरू (50h50h80 सेमी) नै समय अन्तराल समयमा 06,07 किलो पपकर्न उत्पादन।
कार्यक्षमता र उपस्थिति
कार्यक्षमता रूपमा, वाहन को बहुमत ती सबै दुवै मीठो र नूनिलो पपकर्न पकाउन सक्छ, आफूलाई बीचमा फरक छैन। तर, केही स्वादिष्ट व्यवहार मा आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नेहरूका लागि एउटा फाइदा छ तेल, प्रयोग बिना पकाउने प्रदान।
बजार मा उपकरणहरू फरक डिजाइन छ। आफ्नो प्राथमिकता आधारमा, तपाईं पपकर्न रेट्रो शैली बनाउन को लागि वा फुटबल बल, मकै को एक कान वा कोक को एक गर्न सक्छन् को रूप मा एक मिसिन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि आधुनिक भान्सा को भित्री मा पूर्ण फिट जो एक पारंपरिक प्रोसेसर, resembling, चिटिक्क उपकरण हो।
मूल्य र वारेन्टी
पपकर्न पकाउने लागि खुसी उपकरण, र किफायती मूल्य। मूल्य-गुणवत्ता उपकरणहरू मिसिन को प्रदर्शन आधारमा2हजार। पी मा सुरु, तर ठूलो मोडेल लागि 15 ths सम्म भुक्तानी गर्न हुनेछ। अनि अधिक। Popkornitsu फेला सकिँदैन पनि 500 rubles को लागि, तर एक उपकरण जस्तै गुणस्तर धेरै कम हुन अपेक्षा गरिएको छ, र ग्यारेन्टी - बस दुई हप्ता। अन्य मोडेल मा5वर्ष 1 वर्ष देखि ग्यारेन्टी लागू हुन्छ।
पपकर्न मिसिन को निर्माताहरु
पपकर्न पकाउने लागि मिसिन को मुख्य आपूर्तिकर्ता को उत्पादन क्षमता चीन मा हो, तर उपकरण गुणस्तर कम छैन। यस्तो Starfood, Gastrorag, Vitek वा Gemlux रूपमा चारैतिर फैलियो विक्रेताहरु। घरेलू बजार popkornitsy आपूर्ति कम्पनी "Sik" मा।
तपाईं पपकर्न बनाउन को लागि एक राम्रो मिसिन चयन गर्न चाहनुहुन्छ भने, समीक्षा महत्त्वपूर्ण हुनेछ, तिनीहरूले आवश्यक खरीद अघि ध्यान गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्ता धेरै प्रयास गर्न, यो प्रतिस्पर्धी मोडेल विचार के को बारेमा जानकारी पाउन।
कुकिङ पपकर्न मिसिन
एक विशेष उपकरण मा पपकर्न खाना पकाउने कठिनाइ उत्पन्न गर्दैन। यो खाडी मा मकै को अन्न भर्न तेल को एक सानो रकम थप्न र आवश्यक भएमा उपकरणमा बारी मात्र आवश्यक छ। 3-5 मिनेट पछि पपकर्न तयार छ। तयार विनम्रता कर्मेल वा फल सिरप खन्याउन गर्न सक्नुहुन्छ।
या शायद व्यापार मा?
पपकर्न पकाउने लागि उपकरण अक्सर सपिङ्ग सेन्टर वा थिएटर मा पपकर्न बिक्री गर्न एक दृश्य खरिद। व्यापार ठूलो प्रारम्भिक लगानी चाँडै किनभने के र लोकप्रिय को, आफै लागि दिन्छिन् र राम्रो मुनाफा दिन्छ आवश्यकता छैन।
यो केवल माग पूरा गर्न पर्याप्त क्षमता नहुन सक्छ: यो मामला मा पपकर्न बनाउन फिट गर्दैन लागि संकुचित मिसिन कि टिप्पण लायक छ। उपकरण राम्रो प्रदर्शन संग, पूर्ण खरिद गर्नुपर्छ, र सडक मा सञ्चालन गर्न निर्माता द्वारा प्रदान।
उचित हेरविचार उपकरण
कुनै पनि प्रविधी उचित हेरविचार आवश्यक छ। पकाउने पपकर्न लागि उपकरण प्रत्येक प्रयोग पछि धोए गर्नुपर्छ र थप एक पटक भन्दा एउटै तेल मा तयार छैन। तपाईं उपकरण को राम्रो हेरचाह गर्न र निर्देशन पूर्ण अनुसार यो काम गर्न, यो क्षति जोगिन र पपकर्न बनाउन लागि मिसिन को जीवन लम्ब्याउनु आवश्यक छ।
कसरी उसलाई राम्रो braids र प्याज टोकरी को किन प्याज चुल्ठो बुनाई गर्न?
प्रेरणा कुकर Indokor IN3500: विवरण
Cookware डाली फलाम बनेको: चयन र हेरविचार सिफारिसहरू
वोल्गा सवारीसाधान बोट - घरेलू ओटो उद्योग को नेता
सबैभन्दा सुन्दर पुरुष नाम "एक"
तल्ला आउटलेट: प्रकार, माउन्ट सुविधाहरू। सकेट LEGRAND
मालिकहरूको समीक्षा, "शेवरलेट Lacetti" मोडेल विवरण
पेट क्यान्सर को लक्षण
व्यञ्जनहरु मासु, चिकन र जोरजियन संग सूप kharcho। सूप-लाब्रे: खुशी साथ खाना पकाउन कसरी
सुरुचिपूर्ण सुन्दर - कुकुर जर्मन
"यस Sims 4" हो: वर्ण सृष्टिको सम्पादक, आवश्यकताहरु र खेल को एक सिंहावलोकन
Myelogenous लेकिमिया - यो के हो? पुरानो myeloid लेकिमिया: कारणहरू, उपचार, पूर्वानुमान